Mungyeong Ssangyong Valley Pension Kukho Cloud Indawo yokuhlala
Nongam-myeon, Mungyeong-si, North Gyeongsang Province, South Korea
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguYeong Jun
I-Mungyeong Ssangyong Valley Pension apho kunye nokuhlala kwilifu losapho
Ichibi labantwana, i-Ssangyong Valley, i-charcoal grill, i-cauldron, njl.
I-Darakgol Ssangyong Valley yeyona inyukayo, ngoko ilungile kuhambo oluzolileyo losapho
Iindawo ezikufutshane zabakhenkethi
Indawo: Ssangyong Valley, Naeseo-ri, Nongam-myeon, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
Intlambo evela kwiSongnisan iqukuqela kunye ne-Dojangsan kunye ne-Cheonghwasan ngasekhohlo nasekunene, isenza iiNgxangxasi ze-Ssangryong kunye nee-Simwon Falls.
Ibekwe nzulu eNongam-myeon emva kokuhamba ithutyana usuka eMungyeong-si, ke ngoko ayingcoliswa yimpucuko ngaphezu kwayo nayiphi na enye indawo, ngenxa yoko inendawo ecacileyo necocekileyo.
Ipaki yePhondo yaseMungyeong Saejae
Idilesi: 932 Saejae-ro, Mungyeong-eup, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do (288-1 Sangcho-ri)
Ipaki yePhondo yaseMungyeong Saejae, eneentaba kunye neentlambo, kunye nenkcubeko emnandi yookhokho bethu, yindawo yokuphumla kwengqondo nomzimba apho indalo kunye nabantu baphefumla njengenye.
Intwasahlobo eshushu yaseMungyeong
Idilesi: 24, Oncheon 2-gil, Mungyeong-eup, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
I-Mungyeong Hot Spring yi-granite kunye ne-limestone eyenziwe nge-900 m ngaphantsi komhlaba, i-calcium bicarbonate spring, kunye ne-granite 750 m ngaphantsi komhlaba.
Yeyona ndawo inzima yokuphilisa amanzi ashushu kweli lizwe apho unokonwabela iindidi ezimbini zemithombo eshushu kutyelelo olunye ngokubonelela ngamanzi ashushu anealkaline.
IMungyeong Coal Museum kunye neGaeun Filming Site
Yimyuziyam ekhethekileyo eyavulwa ngoMeyi 20, 1999 kwindawo eyayisakuba yi-Eunseong Mining Centre yeKorea Coal Corporation. Inomphandle okhethekileyo ohonjiswe ngeebriquette. Ngendawo eyi-50,135 m2 kunye nomgangatho opheleleyo we-1805.44 m2, ineholo yemiboniso esembindini, iholo yemiboniso emigodini, kunye neholo yemiboniso yangaphandle. Iziqwenga ze-4.571 zezixhobo zemigodi kunye neentlobo ezingama-787 zezimbiwa zibonisiwe, kwaye itonela yokwenene eyi-230m ikwasetyenziswa njengendawo yomboniso. I-Eunseonggwan Plant yayiyindawo apho kwakugrunjwa amalahle ukusuka ngo-1938 ukuya ku-1994. Kwakhona, i-Gaeun Filming Site iyiseti yembali apho iidrama ezininzi kunye neemuvi zafotwa, kwaye yenye yeendawo abantu abaninzi abazijongayo ngenxa yeendawo zayo ezintle zendalo kunye nezinto ezahlukeneyo ezinomtsalane.
Indawo: Jangam-ri, Hwabuk-myeon, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do
Iofisi yePaki yeSizwe yaseSongnisan 043-542-5267
Iphepha lasekhaya: IPaka yeSizwe yaseSongnisan http://songni.knps.or.kr
I-Munmundae yitafile yelitye ephakamileyo eyi-1,054m ebekwe eJangam-ri, eHwabuk-myeon, eSangju-si, kwaye iliwa elingasentla liqhayisa ngesikali esinokuhlala abantu abangama-50 ngaxeshanye.
Kukhuselekile ukunyuka nokuhla ngeebhulorho zentsimbi, kwaye iGamrocheon Stream phakathi kwamawa asemantla idumile.
Idilesi: 187, Gangbyeon-gil, Buljeong, Mungyeong-si, Gyeongsangbuk-do
Uloliwe owawuthwele amalahle kwiminyaka engama-20 eyadlulayo ngoku uguqulwe waba sisixhobo sokhenketho, kwaye wazalwa njengebhayisekile yokuqala yesizwe ethi 'Mungyeong Railway Bike' ehamba kuloliwe. Ibhayisekile kaloliwe, enokufumaneka kuphela eMungyeong, iyonwabisa emehlweni ngelixa ubaleka emlanjeni kunye netonela apho unokuva ukupholisa kweJinnam, enye yeendawo ezisibhozo ezibukekayo eGyeongsangbuk-do. Yiva incasa yamaxesha amane eMungyeong.
'I-Mungyeong Railroad Bike enokuthi yonwabele nosapho, abahlobo kunye nabathandi'
I-Mungyeong Unjeong Zipline
Ihlathi lezoLonwabo leNdalo laseBuljeong liphakathi kweBaekdu-daegan kwi-487, kwaye ikwayindawo ephakathi apho kudlula imigca yomda osemazantsi nakumantla wezilwanyana kunye nezityalo. Izifundo ze-9 eziguquguqukayo ze-zipline zenzelwe ukuba uzive ngokupheleleyo umtsalane oyingqayizivele we-zipline ngokuhambelana komgca we-dizzying kunye nentlambo.
uluhlu lokudubula ngodongwe
Clay ngokudubula, umdlalo ekhethekileyo ukuba unandiphe entsimini ebanzi ngaphandle kumbindi wesixeko kunye nohlobo elihle, nguye lo mdlalo ilungileyo ukukhulula zonke iintlobo uxinezeleko kubantu banamhlanje abo efumba phezu neengxaki ezahlukahlukeneyo yonke imihla. Kukhona. IMungyeong Gwanggwang Shooting Range yenye yeendawo ezimbalwa zokudutyulwa kodongwe kweli lizwe. Ukudubula ngodongwe ngowona mdlalo uphambili, kwaye nabaqalayo banokuwonwabela ngokulula. Ukongeza, unokufumana ukudubula kwepistol kunye nokudutyulwa kompu womoya Ngaphezu kwako konke, iMungyeong Tourist Shooting Range iqhutywa ngelona xabiso liphantsi elizweni. Ukudubula ngodongwe ngumdlalo wemozulu yonke onokuwonwabela ngaphandle nokuba leliphi ixesha lonyaka. KwiRange loShooting labakhenkethi baseMungyeong, iya kuba yindawo yamava akhethekileyo apho ungapheleli nje ukuphelisa uxinzelelo oluqokelelwe kubomi bemihla ngemihla, kodwa ukonwabela ukonwaba okubethwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Yeong Jun
Khangela ipenshoni apho kwibhokisi yokukhangela eluhlaza okanye uthumele umyalezo obhaliweyo kwa-Airbnb